Yaa dhiig baxa daba dheeraaday door dhaxal gal ah ka gaysan kara? Aan farta ku fiiqno! | Hadalsame Media
Home Maqaallada Yaa dhiig baxa daba dheeraaday door dhaxal gal ah ka gaysan kara?...
Yaa dhiig baxa daba dheeraaday door dhaxal gal ah ka gaysan kara? Aan farta ku fiiqno!
(Hadalsame) 10 Juun 2019 – Dalka Soomaaliyeed waa dhigbaxayaa. Labada dhinac ee dagaalamaya dhallintii Soomaaliyeed baa mid waliba dab ku shubayaan. Nafta qofka Soomaaliyeed wey qiimo beeshay. Intaas baan dilay ama intaas bey dileen waa war maalmeedkeena.
Ma ognahay qadiyada laysku hayo ee danta inoo ah? Ma la waayay cod dheer oo nabad ku baaqa? Ma la waayay caqli mustaqbilka ubadkeena u naxa? Ma la waayay caaqil dalka badbadiya?
Mustaqbilka dalku waxa u ku xiranyay ISBEDDEL ay dhaliyaan dhallintu.
Sida taariikhda lagu hayo dalka Itoobiya Boqor Haile Sellase waxaa riday xukunkiisii oo bilaabay kacaankii Mengiste Xukunka ku qabsaday? (1967-1974). Dhallinyaro! Yaa joojiyey dagaalkii Mareykanka iyo Veitnam sannadihii 1970? Dhallinyarada Mareykanka ayaa kasoo horjeestay dagaalkaas. Ayaa furfuraanta dalka Shiinaha (China) horseeday sannadkii 1989-kii? Dhallinyaradii Tiananman Square ku banaanbaxay ayey ahaayeen. Ayaa curiyay xaquuqda dadka madow ee Mareykanka sannadkii 1965? Dhallinyarada madow ee mareykanka ayey ahaayeen. Ayaa Ruushka furfuraanta u bilaabay 1980dii? Dhalliyaradda. Ayaa Dayrtii Carabta Tuniisiya 2010 ka curiyay? Dhallinyarada.
Si gaar ah hadaan u xuso Kacdoonkii dhallinyarada Itoobiya (1967-1974) waxaa hoggaaminayay dhallinyarada Jaamacadda Addis Ababa oo uu horkacayay arday la oran jiray Tilahun Giza oo ugu dambayntii dawladu dishay. Dhallintu waxay ku dagaalameen oo la baxsadeen maydkisii oo dawladu doonaysay in ay markhaati ahaan maxkamad u saaraan. Inagana dhimashada dhallinteenu waa tiro la sheego oo keliya. Nafta dhallinteena iyo tan digaagu waxba isma dhamaan.
Nasiibdaro Soomaalidu dhallinteedii dab aan baqtiyeyn bey maalin walba ku shubaysaa? Waxay u dhimaanayaan qadiyad cid leh aan la ogayn. Waxay u dagaalamayaan ujeeddo aan loo sheegin. Waxay la’yihiin cid u sharaxda hadafkay ay u dhimanayaan.
Dhallinta Soomaaliyeed waxay u baahanyihiin nolol. Waxay u baahanyihiin caafimaad, waxbarasho, shaqo, caddaalad, amaan, iwm. Arrimahaasi Soomaaliya kama jiraan. In mustaqbilka laga abuurana rajo lagama qabo. Waayo dadka Soomaaliya xukuma waa danaystayaal reerahoodu debeda ku noolyihiin oo ay ku haystaan caafimaad,waxbarasho, shaqo.
Waxa aad ii sheegtaan qof Soomaaliya madaxdeeda ka mid oo carruurtiisu Soomaaliya ku nooshahay. MA JIRO! Haddii ay reerahoodu ay Soomaaliya ku noolaan lahayeen, waa laga yaabi lahaa inay ka fakiraan abuurista waxbarasho, caafimaad iyo shaqo iyaga u danaynaya dadkooda. Iminkase MAYA, hana sugin. Kii xukunka ka degana ugu sokayn wuxuu ka degeyaa Kenya.
‘Nin lagu seexdow ha seexan, xil baa ku saaran ee ha seexan!
Qalinkii: Yuusuf Xayd
Previous articleDHACDADII DIINSOOR: ”Markii aan fadhigii kusoo noqonnay waxay nagu tiri wax aynaan ka filayn!” (Qiso dhacday!)
Next articleDAAWO: Iiraan oo soo bandhigtay gantaalo hal mar 6 bartilmaameed cayrsanaya + Sawirro